Funny – Burmese.asia
“သင်္ကြန်တွင်း” မှာ အိမ်တွင်းပုန်းမယ့်အုပ်စု အတွက် အားတက်စေမယ့် အချက် (၅) ချက်…
On April 14, 2019 By mmhtet
၁- ပြဲနေအောင်အိပ်ပါ… သင်္ကြန်ပိတ်ရက်မှာ အိပ်ကြပါ။အခွင့်အရေးရတုန်း ပြဲနေအောင်အိပ်ကြပါ။ လုပ်စရာအလုပ်မရှိတဲ့အတွက် အားတိုင်းယားတိုင်း အိပ်ပါ။ ညဆိုစောစောအိပ်ပါ။ မနက်ဆို နေဖင်ထိုးတဲ့အထိ အိပ်ပါ။နေ့လယ် အားနေရင် အိပ်ပါ။ ညနေလည်း ငေါင်နေရင်ထပ်အိပ်ပါ။ အိပ်မက်လှလှမက်တဲ့အထိ အိပ်ပစ်ပါ။ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့။ ၂- ကားနေအောင်စားပါ… ကားနေအောင်စားပါဆိုတာ ဗိုက်ကားတာကို ဆိုလိုတာပါ၊ ဆာတိုင်း စားပါ၊ မဆာလည်း ဗိုက်က ဆန့်သေးတယ် ဆိုရင် ဆက်စားပါ၊ ဗိုက်ကမဆန့်လည်း ပါးစပ်က ဝါးနိုင် သေးတယ်ဆိုရင် ထပ်စားပါ၊ တစ်နေ့ကို ငါးနပ်လောက် ကားနေအောင်စားပါ၊ မုန့်တွေ တမျိုးပြီးတမျိုးလုပ်စားပါ၊ သူများအိမ်က လာပို့တာတွေလည်း မလွတ်တမ်းစားပါ၊ စိတ်ကူးထဲပေါ်လာတာမှန်သမျှ ထစားပါ။ ဝါးလို့ရတာမှန်သမျှ ပါးစပ်ထဲ ကြုံးထည့်ပြီး အားရပါးရစားကြပါ။ […]
On April 11, 2019 April 11, 2019 By mmhtet
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ အတွက် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ မတ်လမှာ ကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ်။ ယခုနှစ်မှာ ကျင်းပသွားတဲ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီးကတော့ ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီပေးတဲ့ သက်တမ်းတလျှောက်မှ အဝေဖန်ခံရဆုံးပွဲကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ပရိသတ်တွေလည်း အနုပညာရှင်တွေ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ လူတချို့ကိုလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တနှစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဝေဖန်ခံရတဲ့နောက်မှာတော့ အကယ်ဒမီပေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဂယက်တွေကတော့ နည်းနည်းနောနော မဟုတ်အများကြီးကို ပရိသတ်တွေကြားမှာ ပြန့်နှံခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအကယ်ဒမီနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြန့်နှံခဲ့တဲ့ ဂယက်တွေကိုတော့ ပရိသတ်တခုက ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ထားပြီး ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ တော်တော်လေးကို ရယ်ရပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အကယ်ဒမီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ပြောစကားတွေ ဝေဖန်မှုတွေ မှတ်သားဖွယ်စကားတွေ အားလုံးကိုစုပြီးတော့ […]
ဒါရိုက်တာဝိုင်း ရုပ်ရှင်လောကကို စွန့်လွှတ်ပြီ
On April 1, 2019 April 1, 2019 By mmhtet
အကယ်ဒမီ ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းသည် ရုပ်ရှင်လောက ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ပြောကြားသည်။“လှပ်၍လပ်သော” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရုံတင်ပြီးနောက် ကြည့်ရှုသူမရှိဘဲ ဝက်ဝက်ကွဲအရှုံးပေါ်ခဲ့သောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ “ပြည်တွင်းက ပရိတ်သတ်တွေက အစွဲနဲ့ကြည့်ကြတာ၊ အနုပညာကို ကြည့်တာမှ မဟုတ်တာကိုး၊ ကျွန်တော်တို့က စေတနာနဲ့ရိုက်တယ်၊ ပရိတ်သတ်အကြိုက်မရိုက်ဘူး၊ ဒါကြောင့် အကယ်ဒမီပေးတဲ့အချိန်မှာ စေတနာနဲ့ရိုက်ကြောင်းပြောတယ်”ဟု ဒါရိုက်တာဝိုင်းက ရှင်းပြသည်။ မြန်မာပရိတ်သတ်အများစုက မြန်မာကားများ မကြည့်ရန် ဆော်သြနေမှုများကြောင့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ပြသသော နေ့များတွင် လူမလာခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းကမူ ”ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်မရိုက်တော့ဘူးဆိုပေမယ့် ပြည်တွင်းမှာ မရိုက်တာကို ပြောတာပါ၊ ဥရောပမှာတော့ ကျွန်တော့်ကိုကမ်းလှမ်းထားတာတွေရှိတယ်၊ အဲ့မှာတော့ သွားရိုက်ဖြစ်မှာပါ” […]
တပည့်​​တော်မ​ ​ယောက်ျားယူရင် ​ဘုန်းကြီးလူထွက်​ပဲ ရှာယူမှာ
On March 25, 2019 By mmhtet
တပည့်​​တော်မ​ ​ယောက်ျားယူရင် ​ဘုန်းကြီးလူထွက်​ပဲ ရှာယူမှာ ဘုန်းကြီးလူထွက်​ပဲ ယူမယ်​ ” ဘာလဲ ၊ ​လျှောက်စမ်း ” ” တပည့်​​တော်​ ​ယောက်ျားယူရင်​ ဘုန်းကြီးလူထွက် ​ရှာယူမှာ ” ” ဟာ ၊ မသာမ​​လေး ၊ စော​စော စီးစီးကွာ ငရဲကြီး​အောင်​ ​ပြောပြန်​ပြီ ” ” ဘာလို့ ငရဲကြီးမှာလဲ ၊ လူထွက်​ကို ရှာယူတာ ၊ တပည့်​​တော်​​ကြောင့်​ လူထွက်​ရတယ် ​ဆို တ​မျိုး​ပေါ့ ၊ တပည့်​​တော်​က လူထွက်​ပြီးသား ကို ရှာယူမှာ​ ပြောတာ ” ” ​နေပါဦး ညည်းက ​ယောက်ျား​တွေ ဒါ​လောက် […]
ဆရာဝန်ကြီးတောင် အံ့သြသွားရတဲ့ အရူးရေးတဲ့ စာအုပ်😱😱
On March 21, 2019 By mmhtet
ဆရာဝန်ကြီးတောင် အံ့သြသွားရတဲ့ အရူးရေးတဲ့ စာအုပ် အရူး တယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာ စာအုပ် တအုပ် ကိုင်ထားတာ တွေ့တော့ စိတ်ကျန်းမာရေး ဒေါက်တာ က မေးတယ်။ “လက်ထဲမှာ ဘာကိုင်ထား တာလဲ ကိုယ့်လူ” အရူး က ပြောတယ် “ဒါ ဆရာ့ အတွက် ယူလာတာဗျ စာမျက်နာ ၅၀၀ ပါတဲ့ ၊ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ပါ ဆရာ” ဒေါက်တာ ။ ။ “ဟိုက်ရှ် စာမျက်နာ ၅၀၀ တောင်မှ ဘာတွေ ရေးထားတာ လဲကွ” အရူး။ ။ “ စာမျက်နာ အစမှာ ဘုရင် တပါးက မြင်းစီးပြီး […]
ရည်းစား ရလာတဲ့ ညီမက အစ်ကို ဖြစ်သူကို ၀မ်းသာအားရ လာပြောပြသောအခါ
“ကိုရီး … ဝမ်းသာစရာ​ပြောဖို့ ရှိတယ်​သိလား … ” “အမယ်​ … ဘာကိစ္စလဲ ” ကျုပ်​ညီမ​ဗျ … မျက်​နှာကစပ်​ဖြဲဖြဲနဲ့ … ဘာကိုမဟုတ်​တာ​ပြောဦးမယ်​ မသိဘူး “တကယ်​ ဝမ်းသာစရာ သိလား ” “​အေးပါ ဘာဖြစ်​လဲ ” “ညီမ​လေး ရည်းစားရပြီ​တော့ ” ငစ်​ … ရည်းစားရတာကို အစ်​ကိုဆီဝမ်းသာအားရ လာ​ပြောတယ်​လို့​ဗျာ တစ်​ခါမှကိုမ​တွေးဖူးဘူး ထလုပ်​ရင်​ ကျုပ်​ကအနိုင်​ကျင့်​တယ်​ဖြစ်​ဦးမယ်​ “ဒီမယ်​ ​အေးပုံ ရည်းစားရတာ ငါ့ကိုလာ​ပြောရလား ငါ့နှယ်​ အ​ဖေနဲ့တိုင်​လိုက်​ရ ” “ကိုရီး ဘာသိလို့လဲ ဒီတစ်​ခါက ဟိုဖက်​ရွာက ကိုဖိုး​ထောင်​နဲ့ ” “ကျစ်​ … ​ပြော​လေကဲ​လေ […]
ညီမကိုချစ်ရင် ညစာ စားသွားပါလား အကို
ညီမကိုချစ်ရင် ညစာ စားသွားပါလား အကို ” လာ – – သယ်ရင်း မင်း တို့ရပ်ကွက်ထဲ ရောက်တုန်း ရောက်ခိုက်လေးဆော်ချောလေးအိမ် လိုက်ပို့မယ် ” ” ဖြစ်ပါ့မလားကွာ ” ” ဖြစ်ပါတယ်ကွ တို့ဆီက ဧည့်သည်လာရင် မသိလည်း ရိုက်မထုတ် တတ်ပါဘူးဧည့်ဝတ်ကျေအောင် ဧည့်ခံကြပါတယ်ကွ ” ” အဲ့တာ ဆိုရင်လည်း သွားကွာ ” ” လာ – – ရှေ့ကအိမ်ပဲ ” ” ဒေါ်လေး ဒေါ်လေးရေ အလည်လာတယ်ဗျို့ ” ” ဒေါ်လေးရေ – – ” ” ဟေ […]
On March 20, 2019 By mmhtet
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့ တပေါင်းဘုရားပွဲမှ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့ တပေါင်း ဘုရားပွဲ ပွဲဈေးတွင် ဘိုးတော် တယောက် ဗေဒင် ဟောနေတာကို ဘေးက လူငယ် အုပ်စု ၄ ၊ ၅ ယောက်က လှောင် သလိုလို ပြောင် သလိုလိုနဲ့ မျက်နှာ ပြောင်နေ ကြသည် ။ ကြာလာတော့ ဘိုးတော် လည်း ဒေါသ ထွက် လာပြီး ” ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ ငါ့ကို ဘာထင် နေလဲ ၊ ငါ ကျိန်စာတိုက် အင်းခွက် ရေးလိုက်ရင် မင်းတို့ ဘဝတွေ ဘာဖြစ် သွားမယ် […]
Line Walker2ရုပ်ရှင်ရိုက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲများ
On February 21, 2019 By jokerbank
Line Walker2ရုပ်ရှင်ရိုက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲများပါတဲ့ ************************* မီးပွိုင့်များကို Hack သည့်အခန်းတွင် Hack မရသဖြင့် ပွိုင့်တစ်ခုတွင် ယာဉ်ထိန်းရဲ တစ်ဦးစီထား၍ ရိုက်ရခြင်း….. တိုက်၏အရေးပေါ်နောက်ဖေးလှေခါးမှလူဆိုးပြေးဆင်းရန် ကြံသော်လဲ ထမိန် လှမ်းရုံဖြင့်ပြိုကျနိူင်သောကြောင့်ကြိုးဖြင့်ဆင်းရန်ဇာတ်ညွှန်းပြောင်းရခြင်း…… ကြိုးဖြင့်ဆင်းရန်ဇာတ်ညွှန်းပြောင်းသော်လည်း နောက်ဖေးလမ်းကြား ခြေချစရာ နေရာမရှိအမှိုက်များပြည့်နေသဖြင့် တိုက်ရှေ့မှခုန်ချ ရခြင်း……. ဆူလေးဘုရားလမ်းတွင် တစ်နာရီ Km 90 ခန့်နှင့်ကားများအပြိုင်မောင်း၍မှောက်သည့်အခန်းကို ပရိသတ်မှ ဝိုင်းရီခြင်း ဒါရိုက်တာမှ မသိ၍ မေးရာ ဤလမ်းသည် နေ့လည်ဖက်တွင် ယာဉ်ကြောပိတ်၍ Km30ထက်ပိုမောင်း၍မရကြောင်း ပြောပြ.. ပျက်စီးကားများ ပြန်လည်ဝယ်ယူရန် ကားပွဲစားများ လာလာမေး၍ ရှုတင်မန်နေဂျာ ရှောင်ပြေးနေရခြင်း…. SWAT များ ကိုင်ဆောင်သည့်လက်နက်များမှာ […]
ဖြူဖြူ တောင် ထိုင်ငိုသွားစေမယ့် ဖက်ရှင်တွေ၊ အကွက်တွေနဲ့ ဖြူဖြူရဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ Tik Tok Video
On February 2, 2019 By mmhtet
ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဆိုတာကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း သူများထက်ထူးတဲ့ ဖက်ရှင်တွေဝတ်ပြီး သီချင်းဆိုတဲ့အခါမှာလည်း အိုက်တင်အမျိုးမျိုးနဲ့ စင်ပေါ်မှာ ပတ်ပြေးလွန်းလို့ သူများထက်ထူးခြားတဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်… သီချင်းဆိုတဲ့အခါမှာလည်း အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ အးနဲ့ မာန်နဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို အသက်ဝင်အောင် သီဆိုတတ်သူဖြစ်ပါတယ်…သူမဟာ အဆိုပညာမှာတော့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်ထိ မီတယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. . ကဲ ခုတော့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းတောင် ထိုင်ငိုရလောက်မယ့် ဖက်ရှင်အသစ်တွေကို တီထွင်ဝတ်ဆင်သူတစ်ယောက်ပေါ်ထွက်လို့လာပါပြီ သူကတော့ ဖက်ရှင်ပဲ မိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ Tik Tok Video လေးတွေလဲ တင်ထားပါသေးတယ် သူကတော့ တန်ဖိုးကြီးကပစ္စည်းတွေနဲ့ ဖက်ရှင်ဝတ်စုံတွေ ချုပ်ဝတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး. . […]